China Isilingi okanye ukuxhoma uMlilo oMisiweyo kuLuphawu loPhawu oluDumileyo eYurophu ekwenziweni nakwifektri | Saselux
Uphahla okanye ukuxhoma ukuphuma komlilo kuLuphawu oluDumileyo eYurophu
Cukuthengisa okanye ukuxhoma
Ubukhulu: 307 * 257.5* 45mm
① [Iqinisekisiwe i-CE] Uphawu lokuphuma ngokungxamisekileyo kunye neeyunithi zezibane zidweliswe kwiSatifikethi se-CE. Ukudodobalisa umlilo, inaliti ebunjiweyo yezindlu ze-thermoplastic, iMigangatho yeZibane eziNgxamisekileyo, Amandla kunye nezixhobo zeYunithi.
② [Ukunikezelwa kwaMandla aMandla] I-Nickel cadmium backup battery ibonelela ngaphezulu kwe-180mins ngexesha lokucima kombane. Ibhetri etshintshiweyo esetyenzisiweyo kukhanyiso lwophawu olungxamisekileyo lokuphuma inokutshaja kwakhona i-AC 110 / 240V ngaphezulu kwamaxesha angama-300.
③ [Ukuhlala ixesha elide] Ukukhanya okuluhlaza okukhanyayo kuholele ukuxhasa uphawu lokuphuma kwiiyure ezingama-50 000 zobomi kwaye zibonakala ukusuka kwi-100 yeenyawo kude.
④ [Ufakelo olulula] Lo mqondiso we-CE ovunyiweyo okhokelwe luphawu olungxamisekileyo lobuso obungatshatanga okanye obuphindiweyo kwaye isilingi inokuxhonywa ize ixhonywe. Ilungele indawo engamanzi ngaphakathi, kodwa ayimanzi.
⑤ [Umgangatho oQinisekisiweyo kunye neNkonzo] Zonke i-SASELUX zikhokele izibane zokuphuma ngokungxamisekileyo ezigutyungelwe ngumgaqo-nkqubo ongenangxaki IMALI-NGOKUGQIBELA NESIQINISEKISO esixhasa i-5years yeebhodi zombane kunye nezindlu ngenkonzo yobungcali emva kokuthengisa. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, ungaqhagamshelana nathi nangaliphi na ixesha.
Egqithileyo Uluhlu lwe-LED Ephumayo kuNgxamiseko
Okulandelayo: Uhlobo oluhle lwe-LED Phuma uphawu lwamkelwa yiYurophu